‘ह्यासट्याग मीटु’ ले भारतीय पत्रकारिता र बलिउडमा सनसनी, अब के हुन्छ ? – Medianp
‘ह्यासट्याग मीटु’ ले भारतीय पत्रकारिता र बलिउडमा सनसनी, अब के हुन्छ ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, असोज २३, २०७५१०:५५0
एजेन्सी, २३ असोज । केही दिनयता भारतको सञ्चार जगत्का चर्चित पत्रकारहरूमाथि खासगरी कनिष्ठ महिला पत्रकारहरूसँग दुव्र्यवहार वा अशोभनीय व्यवहार गरिएका आरोपहरू लागिरहेका छन् ।
यसलाई कतिपयले भारतीय सञ्चार जगत्को #Metoo को रूपमा वर्णन गरेका छन् । तर के यो अभियानले हलिउडमा जस्तै शक्तिशाली पुरुषहरूलाई अप्ठेरो पार्ला ? हालसम्म आरोपितमध्ये एकदुईजना बाहेक प्रायः धेरै ठूलो पदका छैनन् ।
अमेरिकामा जस्तो ‘हार्भी वाइन्सटिन’ अझै सार्वजनिक भइसकेका छैनन् । यो अभियान अब कसरी अगाडि बढ्नेछ, त्यसैले यसको शक्ति देखाउनेछ । तर यदि विगतको आधार मान्ने हो भने स्थिति धेरै आशाप्रद छैन, किनकि विगतमा भएका यस्तै प्रयास धेरै सार्थक भएन ।
प्राज्ञिक क्षेत्रका केही नाम आरोपित भए तर ट्विटरमा ती चर्चा सेलाइहाले । बलिउडमा पनि आरोप लागे, तर त्यो धेरै अघि बढ्न सकेन ।
साथै जसले आरोप लगाएका छन्, उनीहरूलाई पनि सहज वातावरण छैन । खासगरी यदि ती आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण छैन भने । केही महिलाले आफ्ना आरोप पुष्टि गर्न सामाजिक सञ्जालमा भएका कुराकानी वा ‘च्याट’ का तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् ।
तर जहाँ त्यस्ता प्रमाण छैनन् र जहाँ केवल आरोप छ, त्यहाँ कतिपय महिलामाथि मानहानी तथा कानूनी कारबाहीका धम्की दिइएका छन् । कतिपयले आरोप लगाइएका ट्वीट हटाएका छन् ।
बुलाकी लाएर यस्तो गीत गाएपछी दर्शकले गरे यती फन्नी कमेन्ट (भिडियो सहित)
बाहिरियो ‘Wrong Time’ टिमको यस्तो रोमान्स (भिडियो सहित)
अमेरिका बदल्ने सपना बोकेका अमेरिकी राष्ट्रपतिका पाँच महिला उम्मेदवार